Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Tatitra momba ny risika CDC vaovao amin'ny COVID Shot fahatelo
Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny CDC dia nanangana consortium
Ny tifitra fahatelo. Inona avy ireo fiantraikany amin'ny fampiharana ara-pahasalamam-bahoaka?
Araka ny tatitry ny CDC androany, ny fiantraikan'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy nahita endrika tsy nampoizina taorian'ny fihenan'ny vaksinin'ny COVID-19.
Nanome toky ny CDC fa hanohy hanara-maso ny fiarovana ny vaksinina, ao anatin'izany ny fatrany COVID-19 fanampiny.
Fandinihana CDC momba ny fanaraha-maso ny fiarovana ny doka fanampiny amin'ny vaksinin'ny COVID-19
Inona no efa fantatra momba ny thsy booster tifitra?
Anisan'ireo mpandray anjara tamin'ny fisedrana klinika 306 Pfizer-BioNTech, ny fiatraikany ratsy taorian'ny fatra 3 dia nitovy tamin'ireo taorian'ny fatra 2.
Inona no ampiana amin'ity tatitra ity? tamin'ny tifitra laharana faha-3 navoakan'ny CDC androany?
Nandritra ny 12 Aogositra – 19 septambra 2021, teo amin'ireo mpirotsa-taratasim-bala 12,591 v izay nahavita fanadihadiana tamin'ny fizaham-pahasalamana taorian'ny fatra 3 vaksinin'ny COVID-19 mRNA, 79.4% sy 74.1% no nitatitra ny fihetsika teo an-toerana na teo amin'ny rafitra. doka fahatelo; Ny 77.6% sy ny 76.5% dia nitatitra ny fihetsika teo an-toerana na teo amin'ny rafitra taorian'ny fatra faharoa.
Inona avy ireo fiantraikan'ny fampiharana ny fahasalamam-bahoaka?
Ny tatitra an-tsitrapo ho an'ny v-safe dia tsy nahita endrika tsy nampoizina taorian'ny fihenan'ny vaksinin'ny COVID-19. Hanohy hanara-maso ny fiarovana ny vaksinina ny CDC, ao anatin'izany ny fatrany COVID-19 fanampiny.
Tamin'ny 12 aogositra 2021, ny sampan-draharahan'ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA) dia nanitsy ny fanomezan-dàlana ho an'ny fampiasana vonjy maika (EUA) ho an'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech sy Moderna COVID-19 hanome alalana ny fitantanana doka fanampiny aorian'ny fahavitan'ny andiany fanaovana vaksiny voalohany ho an'ireo olona mendrika. toe-pahasalamana antonony ka mafy ((1,2). Tamin'ny 22 septambra 2021, nanome alalana doka fanampiny ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech ≥6 volana taorian'ny fahavitan'ny andiany voalohany teo amin'ireo olona ≥65 taona, atahorana mafy COVID-19 mafy, na ny fitrandrahana arak'asa na andrim-panjakana mametraka azy ireo ao amin'ny risika be ho an'ny COVID-19 (1). Ny valin'ny fitsapana klinika dingana 3 notontosain'ny Pfizer-BioNTech izay nahitana olona 306 taona 18-55 taona dia nampiseho fa ny fiatraikany ratsy taorian'ny nahazoana ny fatra fahatelo notanterahina 5-8 volana taorian'ny nahavitan'ny andiany fanaovam-baksiny voalohany 2-mRNA dia mitovy amin'ny ireo izay notaterina taorian'ny nahazoana ny doka 2; ireo fanehoan-kevitra ratsy ireo dia nahitana tranokala tsindrona malefaka sy antonony ary ireo fihetsika rafitra (3). Ny CDC dia namolavola v-safe, rafitra fanaraha-maso an-tsitrapo an-tsitrapo an'ny smartphone, hanomezana vaovao momba ny fiatraikany ratsy taorian'ny vaksinin'ny COVID-19.
Nifanindran-dàlana tamin'ny fanomezan-dàlana fanampiny ny doka fanampiny ho an'ireo olona voan'ny aretina immunocompromising, nohavaozina ny v-safe platform mba hahafahan'ny mpiangona miditra mampiditra vaovao momba ny fatra fanampiny vaksinin'ny COVID-19. Nandritra ny 12 Aogositra – 19 septambra 2021, totalin'ny mpiangona v-22,191 19 no nitatitra fa nahazo dosia vaksinin'ny COVID-97.6 fanampiny. Ny ankamaroany (2%) dia nitatitra andiany fanaovam-baksiny 3 doka mRNA voalohany narahina fatra fahatelo tamin'io vaksinina io ihany. Anisan'ireo nahavita fanadihadiana momba ny fahasalamana ho an'ireo fatra 12,591 (58.1; 79.4%), 74.1% sy 3% no nitatitra ny fihetsika teo an-toerana na teo amin'ny rafitra, taorian'ny fatra 77.6, raha ampitahaina amin'ny 76.5% sy 2% izay nitatitra ny eo an-toerana na ny rafitra. fanehoan-kevitra, tsirairay avy, aorian'ny doka 19. Ireo fikarohana voalohany ireo dia tsy mampiseho firafitra fanehoan-kevitra tsy ampoizina aorian'ny fatran'ny vaksinin'ny COVID-19; ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra ratsy ireo dia malefaka na antonony. Ny CDC dia hanohy hanara-maso ny fiarovana ny vaksinina, ao anatin'izany ny fiarovana ny fatra fanampiny amin'ny vaksinin'ny COVID-XNUMX, ary hanome data hitarika ny tolo-kevitra momba ny vaksina sy hiarovana ny fahasalamam-bahoaka.
V-safe dia rafitra fanaraha-maso an-tsitrapo ataon'ny US fiarovana an-tsitrapo; ireo olona vita vaksiny afaka mahazo vokatra vaksinina nahazo alalana na nahazo alalana dia afaka misoratra anarana soa aman-tsara. Ny v-safe plate dia ahafahan'ny mpirotsaka an-tsehatra milaza fa mahazo doka fanampiny ho an'ny vaksinin'ny COVID-19 sy ireo mpiangona vaovao hiditra amin'ny fampahalalana momba ny fatran'ny vaksinin'ny COVID-19 voaray. Ny fanadihadiana ara-pahasalamana azo antoka V dia alefa mandritra ny andro 0-7 aorian'ny isaky ny fatra vaksinina ary misy fanontaniana momba ny toerana fanindronana eo an-toerana sy ny fiovan'ny rafitra ary ny fiantraikan'ny fahasalamana.† Ireo mpiasan'ny mpiasa ao amin'ny System Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dia nilaza fa nisy mpitsabo nokarohina taorian'ny vaksiny ary namporisika na nanamora ny famitana ny tatitra VAERS, raha voalaza izany.§
Anisan'ireo mpirotsaka an-tserasera azo antoka izay nilaza fa nahazo doka vaksinin'ny COVID-19 fanampiny nandritra ny 12 Aogositra – 19 septambra 2021, ny angona demografika, ny fihetsika eo an-toerana sy ny rafitra ary ny fiantraikan'ny fahasalamana notaterina nandritra ny andro 0-7 dia nofaritana tamin'ny fomban'ny vaksiny (ie , mpanamboatra vaksiny voaray isaky ny fatra). Ireo olona nitatitra fa nahazo andian-dahatsoratra voalohany avy amina mpamokatra isan-karazany na mpanamboatra iray izay tsy fantatra na tsy nisy tany Etazonia, na vaksinina 2 fatra taorian'ny nahazoana vaksinina tokana (150) Janssen (Johnson & Johnson) (XNUMX) dia nesorina tamin'ny fanadihadiana. ny fiatraikany ratsy taorian'ny nahazoana ny fatra fanampiny.
Ny fotoana lasa rehefa vita ny andiany voalohany fanaovana vaksiny ka hatramin'ny nahazoana fatra fanampiny dia nofaritana tamin'ny alàlan'ny fanaingoana vaksiny. Ny mombamomba ny tranga ratsy taorian'ny fatra 2 sy 3 dia nampitahaina amin'ireo mpiangona izay nahazo vaksinin'ny mRNA avy amin'ny mpamokatra iray ihany ho an'ny fatra 3 rehetra.¶ Ny lozisialy SAS (kinova 9.4; SAS Institute) dia nampiasaina hitarika ny famakafakana rehetra. Ireo hetsika fanaraha-maso ireo dia nodinihan'ny CDC ary narahina mifanaraka amin'ny lalàna federaly sy ny politika CDC. **
Nandritra ny 12 Aogositra – 19 septambra 2021, dia totalin'ny mpiangona v-22,191 19 no nilaza fa nahazo doka fanampiny ho an'ny vaksinin'ny COVID-XNUMX rehefa vita ny andiany voalohany (table 1). Anisan'ireny, 14,048 (63.3%) ny vehivavy, ary manodidina ny 30% dia samy 18-49, 50-64, ary 65-74 taona.
Ny ankamaroan'ireo nisoratra anarana (21,662; 97.6%) dia nitatitra fa nahazo doka fahatelo avy amin'ilay mpanamboatra mitovy amin'ny andiany vaksinin'ny mRNA voalohany, ao anatin'izany ny 98.6% mpandray Moderna sy 98.2% an'ny mpandray Pfizer-BioNTech. Vitsy ny mpiraki-draharaha (341; 1.5%) no nitatitra andiana vaksinin'ny mRNA voalohany narahina dosie vaksinina mRNA fanampiny avy amina mpanamboatra hafa, fatra vaksinin'ny Janssen aorian'ny nahazoana andiam-panatanjahantena mRNA voalohany (10; 0.05%), na fanampiny fatra vaksinin'ny COVID-19 avy amin'ny mpanamboatra aorian'ny vaksinin'ny Janssen (178; 0.8%).
Anisan'ireo mpirehidrehitra tsy miovaova 22,191 v, ny elanelam-potoana mediana hatramin'ny nahavitana ny andiany vaksiny COVID-19 voalohany hatramin'ny fahazoana fatra fanampiny dia 182 andro (elanelam-potoana [IQR] = 160–202 andro) (table 2). Anisan'ireo nahazo vaksinin'ny Janssen 2 fatra, fohy kokoa ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny fatra (84 andro; IQR = 16-136 andro).
Ny fanehoan-kevitra eo an-toerana (16,615; 74.9%) sy ny rafitra (15,503; 69.9%) dia notaterina nandritra ny herinandro taorian'ny fatra fanampiny vaksinin'ny COVID-19, izay matetika no iray andro taorian'ny vaksiny. Ny fanehoan-kevitra matetika dia ny fanaintainan'ny toerana misy tsindrona (15,761; 71.0%), havizanana (12,429; 56.0%), ary aretin'andoha (9,636; 43.4%).
Anisan'ireo nahazo doka fanampiny 22,191 7,067, 31.8 (28.3%) nitatitra ny fiantraikan'ny fahasalamana, ary manodidina ny 6,287% (401) no nilaza fa tsy afaka nanao hetsika ara-dalàna isan'andro, matetika indrindra ny ampitson'ny vaksiny. Fikarohana 1.8 (0.1%) no notadiavin'ny mpitsabo, ary XNUMX (XNUMX%) no naiditra hopitaly. Ny antony ahazoana fitsaboana ara-pitsaboana na hopitaly dia tsy fantatra tamin'ny fanadihadiana natao soa aman-tsara; na izany aza, ny mpiraki-draharaha izay nanondro fa notadiavina vaksiny taorian'ny vaksiny dia nifandraisan'ny mpiasan'ny VAERS ary namporisihina hamita ny tatitra VAERS.
Ao amin'ireo mpiadina voasoratra anarana 21,658 v-azo antoka izay nahazo vaksinina mRNA mitovy amin'ny fatra 3 rehetra, 12,591 (58.1%) no nahavita fanadihadiana iray farafahakeliny farafahakeliny tamin'ny andro 0-7 taorian'ny fatra 3 rehetra; 79.4% sy 74.1% no nitatitra ny fihetsiky ny eo an-toerana na ny rafitra aorian'ny rafitra 3, raha ampitahaina amin'ny 77.6% sy ny 76.5% izay nitatitra ny fihetsika eo an-toerana na eo amin'ny rafitra, aorian'ny fatra 2. Anisan'ireo mpirotsa-taratasy nahazo fatra 3 an'ny Moderna (6,283), eo an-toerana ny fanehoan-kevitra dia notaterina matetika taorian'ny doka 3 noho ny doka 2 (5,323; 84.7% sy 5,249; 83.5%; p-sanda = 0.03) (Figure). Ny fanehoan-kevitra momba ny rafitra dia matetika no nitatitra taorian'ny fatra 3 noho ny fatra 2 (4,963; 79.0% sy 5,105; 81.3%; p-sanda <0.001).
Amin'ireo mpiasam-panjakana izay nahazo fatra 3 an'ny Pfizer-BioNTech (6,308), ny fanehoan-kevitra eo an-toerana dia notaterina matetika taorian'ny fatra 3 noho ny fatra 2 (4,674; 74.1% sy 4,523; 71.7%; p-sanda <0.001). Ny fanehoan-kevitra momba ny rafitra dia matetika no nitatitra taorian'ny fatra 3 noho ny fatra 2 (4,363; 69.2% sy 4,524; 71.7%; p-sanda <0.001). Anisan'ireo nitatitra ny fanaintainana taorian'ny fatra 3 tamin'ny vaksinina mRNA, ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra dia malefaka (4,909; 51.4%) na antonony (4,000; 41.9%); fanaintainana mafy (voafaritra ho fanaintainana izay mahatonga ny hetsika isan'andro sarotra na tsy azo atao) dia notaterin'ny 637 (6.7%).
Tamin'ny 19 septambra 2021 dia olona 2.21 tapitrisa teo ho eo tany Etazonia no nahazo vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-19 fanampiny†† rehefa vita ny andiany voalohany. Nanomboka tamin'ny 12 Aogositra – 19 septambra 2021, tsy nisy endrika tsy nampoizina tamin'ny fanehoan-kevitra ratsy hita teo amin'ireo mpirehidrehitra tsy miovaova 22,191 v izay nahazo fatra fanampiny vaksinin'ny COVID-19. Ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra eo an-toerana sy eo amin'ny rafitra dia maivana ho antonony, mandalo ary matetika no nitatitra ny ampitson'ny vaksiny. Ny ankamaroan'ny registrants izay nahazo doka fanampiny dia nitatitra ny andiana vaksiny fanabeazana mRNA voalohany narahin'ny fatra fahatelo avy amin'ilay mpamokatra iray ihany.
Ny fitsapana ara-pitsaboana Pfizer-BioNTech, izay nahitana olona 306 taona 18-55 taona, dia naneho fa ny fanehoan-kevitra taorian'ny fatra 3 dia nitaha tamin'ireo voalaza taorian'ny fatra 2 (3). Na izany aza, io fanadihadihana ireo angona v-azo antoka io dia hita fa ny fanehoan-kevitra eo an-toerana dia somary fahita matetika sy ny fanehoan-kevitra rafitra tsy dia fahita taorian'ny fatra 3 an'ny Pfizer-BioNTech.
Ny lamin'ny fanehoan-kevitra ratsy dia voamarina aorian'ny fatra 3 an'ny vaksinin'ny Moderna na Pfizer-BioNTech dia nifanaraka tamin'ny fanehoan-kevitra voalaza teo aloha taorian'ny nahazoana ny doka 2
Ny isan'ny registrants izay nanondro fa nahazo doka 2 an'ny vaksinina Janssen na nahazo ny fatra fanampiny avy amina mpanamboatra iray hafa amin'ny an'ny andiany voalohany dia kely, mametra ny fehin-kevitra.
Voafetra ny angona momba ny fiarovana na ny fahombiazan'ny vaksinin'ny vokatra vaksinin'ny COVID-19 avy amin'ny mpamokatra samihafa; ny Komity Mpanolo-tsaina momba ny fomba fanaovana tsimatimanota (ACIP) dia mamporisika ny olona manana antonony faran'izay mafy ny fepetra fanefitra-poomisamoana mahazo fatra fahatelo amin'ny vaksinin'ny mRNA COVID-19 avy amin'ilay mpanamboatra azy ihany ho andiany voalohany.
Ny tolo-kevitry ny CDC ho an'ny doka fanampiny dia tsy misy olona nahazo vaksinin'ny Janssen amin'izao fotoana izao.
Nandritra ny vanim-potoana nandraketan'ity fandalinana ity, ny tolo-kevitry ny ACIP ho an'ny doka fanampiny ho an'ny vaksinin'ny COVID-19 dia voafetra ho an'ireo olona somary antonony amin'ny fepetra fanefitra amin'ny fomba mahery vaika izay nahazo
Dosis 2 amin'ny vaksinin'ny mRNA.
Ny fanadihadiana natao teo amin'ireo mararin'ny hemodialisis voan'ny immococpromised dia nitatitra fa ny fihetsika eo an-toerana sy ny rafitra aorian'ny fatra faha-3 amin'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech dia nitovy tamin'ireo taorian'ny fatra 2.¶ Ny tatitra vao haingana momba ny aretina tamin'ny olona vita vaksiny ary ny fitomboan'ny fihanaky ny tsimok'aretina B.1.617.2 (Delta) miova amin'ny SARS-CoV-2, ilay virus izay miteraka COVID-19, eo amin'ireo olona vita vaksiny dia mety nanosika olona sasany hitady fatra fanampiny ivelan'ny tolo-kevitra. Ny elanelam-potoana mediana hatramin'ny nahavitana ny andiany voalohany ka hatramin'ny nahazoana doka fanampiny dia 6 volana teo ho eo; noho izany, ireo olona laharam-pahamehana mandritra ny famoahana ireo vaksinin'ny COVID-19, ao anatin'izany ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olon-dehibe, dia mety nahazo fatra fanampiny.
Ny valiny ato amin'ity tatitra ity dia iharan'ny famerana efatra farafaharatsiny. Voalohany, ny fisoratana anarana amin'ny v-safe dia an-tsitrapo ary toa tsy solontenan'ny vahoaka amerikana vita vaksiny; ny ankamaroan'ny mpandray anjara dia nilaza ny tenany ho fotsy sy tsy Hispanika. Faharoa, nandritra io fotoana nianarana io, ny tolo-kevitra momba ny fatra fanampiny dia voafetra ho an'ireo olona manana toe-pahasalamana famonoana olona izay nahavita andiana vaksiny mRNA COVID-19 voalohany; na izany aza, ny v-safe dia tsy misy fampahalalana momba ny statut de immune.
Ireo mpandray doka fanampiny dia mety ahitana olona manana sy tsy misy fepetra fanefitra. Fahatelo, ny fifandraisana misy eo amin'ny vaksinina sy ny tranga ratsy eo amin'ny klinika dia voalaza fa taorian'ny vaksiny dia tsy azo apetraka amin'ny alàlan'ny angona v-azo antoka. Ary farany, tsy ampy ny angon-drakitra mba hamaritana ny volon'ny fiatraikany ratsy taorian'ny nahazoana doka fanampiny avy amin'ny mpanamboatra iray hafa amin'ny andiany voalohany na ho an'ny vaksinin'ny Janssen.
Dosis fanampiny ho an'ny vaksinin'ny mRNA COVID-19 dia atolotra ho an'ireo olona somary antonony amin'ny fepetra famonoana olona (5).
CDC dia nanolotra fatra fanampiny ho an'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech ≥6 volana aorian'ny nahavitana ny andiany vaksiny voalohany amin'ireo olona ≥65 taona, ireo mponina ao amin'ny toeram-pitsaboana maharitra, ary ireo olona 50-64 taona manana aretina. ny olona 18-49 taona miaraka amin'ny toe-pahasalamana ifotony sy ny olona 18-64 taona atahorana hitombo ny fihanaky ny COVID-19 sy ny fivezivezena noho ny toerana misy ny asa na ny andrim-panjakana dia mety hahazo fatra fanampiny miorina amin'ny tombontsoa manokana sy ny loza mety hitranga.
Ny fanadihadiana voalohany momba ny angon-drakitra azo antoka avy amin'ny> 22,000 v-safe registrants dia mampiseho fa nitombo kely ny fanehoan-kevitra eo an-toerana ary nihena kely ny fihenan'ny rafitra taorian'ny doka 3 an'ny mRNA noho ny taorian'ny doka 2.
Tsy nisy endrika fanehoan-kevitra ratsy tsy nampoizina hita; ireo izay notaterina dia malefaka sy antonony ary vetivety. Ny CDC dia hanohy hanara-maso ny fiarovana ny fatra fanampiny amin'ny vaksinin'ny COVID-19. Ny angona fanampiny momba ny fiatraikany ratsy mifandraika amin'ny fitambaran'ny vaksinina sy ny fotoana hatramin'ny nahavitana ny andiany voalohany dia zava-dehibe amin'ny fitarihana ny tolo-kevitry ny fahasalamam-bahoaka.
Hispanika / Latino 8.0 15.3 0 8.2 5.6 0 25.0 6.3 10.6 8.2
Tsy-Hispanika / Latino 87.7 81.9 100 87.6 90.9 100 54.2 89.1 89.4 87.6
Firazanana maro 1.9 2.1 0 1.8 1.5 16.7 4.2 4.7 3.0 1.9
fanafohezan-teny: AI / AN = Indiana Amerikanina / Alaska Teratany; NHPI = Teratany Hawaii na Nosy Pasifika hafa.
* Ny isan-jaton'ny mpiadina izay nahavita fitsirihana fahasalamana v-azo antoka farafaharatsiny tamin'ny andro 0-7 taorian'ny vaksiny.
† Andiany fanaovana vaksiny voalohany.
§ Ahitana olona nahazo dosia tokana Janssen voalohany ary vaksin 1 fanampiny avy amin'ireo mpamokatra voatanisa.
Andro taorian'ny andiany voalohany, mediana (IQR) 182 (164 - 198) 183 (161 - 204) 173 (141 - 182) 183 (157 - 209) 186 (161 - 217) 123 (113 - 182) 84 (16 - 136) 156 (140 - 164) 150 (136 - 167) 182 (160 - 202)
Izay fanehoan-kevitra amin'ny tranokala fanindronana 80.9 64.6 75.0 69.4 81.7 83.3 25.0 70.3 80.3 74.9
mangidihidy 20.0 11.8 0 8.4 10.2 16.7 10.4 6.3 7.6 13.9
mamontsina 33.6 17.4 0 16.8 30.5 16.7 6.3 12.5 18.2 24.8
Izay mety ho fihetsiky ny rafitra 75.2 59.7 50.0 65.1 76.1 100 31.3 68.8 63.6 69.9
Fanaintainana amin'ny ratra 8.4 3.5 0 6.4 8.1 16.7 4.2 3.1 6.1 7.3
Mangatsiaka 31.3 8.3 50.0 17.5 33.5 50.0 8.3 23.4 10.6 24.1
Aretim-pivalanana 9.9 7.6 0 9.0 9.6 16.7 8.3 6.3 9.1 9.4
havizanana 61.8 44.4 0 51.0 60.9 83.3 14.6 48.4 50.0 56.0
fanaviana 36.4 20.1 50.0 22.2 37.1 50.0 6.3 37.5 12.1 29.0
Aretin'an-doha 49.0 31.1 0 38.4 49.7 83.3 18.8 35.9 40.9 43.4
mpiara fanaintainana 33.0 18.8 0 23.0 31.0 33.3 16.7 20.3 19.7 27.7
maloiloy 18.8 10.4 25.0 13.6 21.3 33.3 8.3 9.4 18.2 16.1
maimaika 2.3 0.7 0 1.9 2.5 0 4.2 1.6 1.5 2.1
mandoa 2.2 2.1 25.0 1.4 2.0 0 2.1 0 0 1.7
Misy fiatraikany ara-pahasalamana 39.2 19.4 0 25.2 39.1 33.3 16.7 28.1 24.2 31.8
Tsy afaka manao hetsika mahazatra isan'andro 35.2 18.1 0 22.1 33.0 33.3 10.4 25.0 15.2 28.3
Tsy afaka miasa na mandeha mianatra 13.7 4.9 0 9.0 21.3 16.7 10.4 6.3 13.6 11.3
Fitsaboana ilaina 2.1 1.4 0 1.5 3.0 0 6.3 0 0 1.8
toeram-pitsaboana 0.7 0.7 0 0.6 0.5 0 4.2 0 0 0.6
Fitsidihana vonjy maika 0.2 0 0 0.2 0 0 4.2 0 0 0.2
hopitaly 0.05 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
Figure. Ny fiatraikany ratsy sy ny fiatraikany ara-pahasalamana notaterin'ny olona izay nahazo fatra 3 * Moderna (N = 6,283) na vaksinin'ny Pfizer-BioNTech (N = 6,308) COVID-19 ary nahavita fanadihadiana fizahana fahasalamana v-azo antoka farafaharatsiny tamin'ny andro 0– 7 isaky ny fatra, isaky ny fatra - Etazonia, 12 Aogositra – 19 septambra 2021
Ny orinasa Aziatika Transformative Pharmaceutical Products...